Tourism | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section 1 » Tourism
Wed 19 Feb 2020 - 12:18
အနီရောင် အုတ်ချပ်များ ဖြင့် ခံ့ညားထည်ဝါနေသော ပုဂံဘုရား များ၏ မြင်ကွင်းနှင့် အစပြုထား သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း မောင်နှင့်နှမ၊ သားနှင့်အမိ ကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်သော မြင်ကွင်းများအဖြစ် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားသည်။
ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းဖွင့်မည်
Wed 12 Feb 2020 - 11:18
ချင်းပြည်နယ် ဒေသဆိုင်ရာ ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းကို ဟားခါးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသား ၅၀ ဦး ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ချင်းပြည်နယ် တာဝန်ခံ ဦးအောင်ဖြိုးက ပြောသည်။
၂၀၁၉ အတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ယာဉ်တန်းခရီးစဉ်ဖြင့် ခရီးသွား ၂,၀၀၀ ကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့
Wed 12 Feb 2020 - 11:16
၂၀၁၉ တစ်နှစ်တာအတွင်း နယ် စပ်ဖြတ်ကျော် ယာဉ်တန်းခရီးစဉ် (Caravan Tour)ဖြင့် ခရီးသွား ၂,၆၀၀ ကျော် ဝင်ရောက်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန် ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ပထမအ ပတ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး အီတလီနှင့် မြန်မာ MoU လက်မှတ်ရေးထိုး
Wed 12 Feb 2020 - 11:15
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အီတလီကုန်သည် ကြီးများအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမှတ်တရ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချသူများအသင်း၊ မြန် မာတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းတို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU)လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မီးခိုးတိတ်စက်ရုံတွေ ပြိုလဲပြီလား
Wed 05 Feb 2020 - 12:19
တရုတ် ဧည့်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည့် မဝင်းပပသည် ဇန်နဝါရီလကုန် ပိုင်းတွင် တိုင်ပေခရီးသွားများနှင့် မန္တလေးမြို့တွင်း လှည့်လည်ခဲ့ပြီး နောက် နောက်ထပ်သွားမည့် ခရီးစဉ်များရှိသော်လည်း မသွားဖြစ်တော့ဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် မည်သည့်အချိန်တွင် ခရီးသည်များကို ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးရမည်ကို မဝင်းပပ မသိရှိပေ။
တရုတ်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများကို ဟိုတယ်ခရီးက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမည်
Sun 02 Feb 2020 - 20:57
တရုတ်ခရီးသွားများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီ များနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်(ယနေ့)၌ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဟု မြန်မာ နိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များအ သင်း အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သဇင် ဖေချစ်က ပြောသည်။
ပြည်ပသို့ ခရီးသွားပို့ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရာတွင် အာမခံကြေးကျပ်သိန်း ၁၀၀ သွင်းရမည်
Wed 29 Jan 2020 - 12:03
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အာမခံကြေး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ပေး သွင်းရမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကော် မတီဝင် ဦးလင်းထိန်က ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ပြောသည်။
ဖယ်ခုံအင်းအတွင်း အပျော်စီးရေယာဉ်နှစ်စီးကို စမ်းသပ်ပြေးဆွဲ
Wed 29 Jan 2020 - 12:02
ခရီးသွားမြှင့်တင်ရန် ရည် ရွယ်၍ ဖယ်ခုံအင်းအတွင်း အ ပျော်စီး Houseboat ရေယာဉ်ငယ် နှစ်စီး စတင်စမ်းသပ်ပြေးဆွဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း Lake Pekhon Houseboats ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ ကိုနေမိုးအောင်က ပြောသည်။
၂၀၁၉ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပခရီးသွားနှစ်သန်းနီးပါး ၀င်ရောက်ခဲ့
Wed 29 Jan 2020 - 11:50
ယမန်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပခရီးသွား နှစ်သန်းခန့် လာရောက် ပြီး ၂၀၁၈ ထက် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
Wed 22 Jan 2020 - 11:36
ဂျာမန်စာရေးဆရာ ဂျန်ဖီလစ်န်ကာ၏ ရင်ခုန်သံကြားရခြင်း အနုပညာ (The art of Hearing Heartbeat) စာအုပ်ထဲမှ ဇာတ် လမ်းအခြေတည်ရာ ကလောမြို့ သည် မြန်မာသာမက ကမ္ဘာတွင် လည်း အပန်းဖြေစရာနေရာအ ဖြစ်ကျော်ကြားနေသည်။ ထင်းရှူး မြို့တော်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်သည့် ကလောမြို့သည် အမြင့်ပေ ၄,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် ရှမ်းရိုးမ တောင်တန်းတွင် အေးချမ်းစွာ တည်ရှိသည်။
Wed 15 Jan 2020 - 12:03
ခရီးသွား သုံးယောက်ကို ထမ်းပိုးထားသည့် တရုတ်ဆိုင်ကယ်၏ အင်ဂျင်သံက တိတ်ဆိတ်နေသည့် ကိုင်ဆီးတောင်တန်း၏ နံနက်ခင်းကို လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ ဆိုင်ကယ်၏ တစ်ဖက်တွင် တောင်နံရံရှိပြီး အခြားတစ်ဖက်၌ ချောက်ကမ်းပါးရှိနေသည်။
မုန်ယိုနေသည့်ဆင်ကို ဖမ်းဆီးစဉ် တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ဆင်ဦးစီးတစ်ဦး ထပ်မံဒဏ်ရာရ
Sun 29 Dec 2019 - 19:26
မုန်ယိုနေသည့်ဆင်ကို ကွန်ဂျီ (ခေါ်) စွယ်စုံရဆင်သုံး ကောင်ဖြင့်ဖမ်းဆီးစဉ် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ဆင်ဦးစီးတစ်ဦး ထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
ဆယ်အိမ်တန်းကမ်းခြေတွင် လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်မည်
Wed 25 Dec 2019 - 12:04
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွမ်းခြံ ကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဆယ်အိမ်တန်း ကမ်းခြေ၌ လာမည့်နှစ်တွင် လူထု အခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း(CBT) ဖော်ဆောင်မည်ဟု ကရင်တိုင်း ရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီး နော်ပန်း သဉ္ဇာမျိုးက ပြောသည်။
ဘားအံမြို့၌ မီးပုံးပျံစီးသည့် အစီအစဉ် လာမည့်နှစ် စတင်မည်
Wed 25 Dec 2019 - 12:03
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့တွင် မီးပုံးပျံစီးပြီး သဘာဝရှုခင်းအလှ ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည့် အစီအ စဉ်ကို Oriental Ballooning ကုမ္ပ ဏီက ၂၀၂၀ တွင် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။
စံကားအင်းကို ခရီးစဉ်ဒေသအဖြစ် ဖော်ဆောင်ရန် စီစဉ်
Wed 25 Dec 2019 - 12:00
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းရှိ စံကားအင်းကို ခရီးသွား ဒေသတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေ ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထင်အောင် နိုင်က ပြောသည် ။
ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားသို့လာသည့် ပြည်ပဧည့်သည်များကို ဝင်ကြေးကောက်မည်
Tue 24 Dec 2019 - 16:41
ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန် မြို့နယ်ရှိ ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားသို့ လာရောက်သည့် နိုင်ငံ ခြားခရီးသွားများကို လာမည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ကစတင်၍ တစ်ဦးလျှင် ဝင်ကြေးကျပ် ၅,၀၀၀ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (UMTA) က ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
ဒေသအချို့တွင် ဟိုတယ်သစ်များ တည်ဆောက်မည်ဟုဆို
Wed 18 Dec 2019 - 11:57
ငပလီအပါအ၀င် ခရီးစဉ်ဒေသ အချို့တွင် စရိတ်သက်သာသည့် ဟိုတယ်များ ထပ်မံတည်ဆောက် ရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲနေကြောင်း အမတဟိုး(လ်)ဒင်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်က ပြောသည်။
မြန်မာသို့ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ယမန်နှစ်ကထက် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်
Wed 18 Dec 2019 - 11:56
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားဧည့်သည် လာရောက်မှုပမာဏသည် ၂၀၁၈နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိ တိုးတက်လာသည်ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်က ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ်၌ ဂျပန်ဘာသာစကား အခမဲ့သင်ကြားမည်
Wed 18 Dec 2019 - 11:54
ဂျပန်ဧည့်လမ်းညွှန် လိုအပ်ချက် ကြောင့် ဒေသတွင်း၌ ဂျပန်ဘာ သာစကား အခမဲ့သင်ကြားပေး မည်ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (လွိုင်ကော်)က ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
Wed 04 Dec 2019 - 10:26
၂၀၁၇က အမေရိကန် ဧည့်သည်များကိုရေလယ်ကျောက်တန်း ဘုရားသို့ လိုက်ပို့စဉ် သန့်စင်ခန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဧည့်လမ်းညွှန် မဒါလီစိတ်ညစ်ခဲ့ရသည်။ ဧည့် သည်က ဘိုဘိုင်သန့်စင်ခန်း အသုံးပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာ အနီးအနားရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်သို့ သွား ရောက်၍ သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုခွင့် ပေးရန် အကူအညီတောင်းခဲ့ရ သည်။
No. 2373, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020
No. 2372, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020
No. 2371, MONDAY, FEBRUARY 17, 2020
No. 2370, SUNDAY, FEBRUARY 16, 2020
No. 2369, SATURDAY, FEBRUARY 15, 2020